Madaxweynaha Maamulka KMG ah ee Jubbaland oo lagu soo dhaweeyey Doolow “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Maamulka KMG ah ee Jubbaland oo lagu soo dhaweeyey Doolow “SAWIRRO”
Madaxweynaha Maamulka KMG ah ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Shacabka oo sitay boorar ayaa wafdiga waxa ay ku soo dhaweeyeen garoonka degmada Doolow ee gobolka Gedo ayada oo ay horkacayeen Madaxweyne ku-xigeenka Maamulka KMG ah ee Jubbaland mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga ee Maamulkaasi Mudane Cabdirashiid Cabdisalaan Janan iyo mas’uuliyiin kale.
Soo dhaweynta kadib ayaa waxaa saxaafada lahadley Axmed Maxamed Islaam oo uga mahadceliyey soo dhaweynta dadweynaha ay u sameeyeen iyo sida uu ugu faraxsanyahay booqashada uu ku tegay Degmada Doolow.
“Waxaan aad uga mahadcelinayaa soo dhaweynta, waxaana dareemayaa dadka shucuumtooda iyo farxada kamuuqata, waan idiin imaaney, waana idinla joogi doonaa, halkana waxaan u imaaney wadatashi iyo sidii horey loogu sii socon lahaa ee halkaan joogno aan uga sii ambaqaadi laheyn” ayuu yiri Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubbaland.
Waa markii ugu horeysey ee uu Axmed Madoobe booqasho ku tego degmada Doolow.
Maxaa is bedelay booqashadii 1aad ee Erdogan kadib? “Sawirro”